Umdaniso wee-tulips, imfihlakalo yokubulawa kukaNatalia Etxano | Uncwadi lwangoku
Umdaniso wee-tulips yimincili ngumbhali waseSpain uIbon Martín Álvarez. Incwadi yapapashwa ngo-2019 kwaye ngexeshana elincinci yayikwindawo zokuqala zentengiso, eyonyusa kakhulu ikhondo lomsebenzi wombhali. Namhlanje, i-Ibon yamkelwe njengenye yezona zinto zibalaseleyo zolu hlobo, kwaye sele ibizwa ngokuba: "inkosi yaseBasque yokurhanela"
Imfihlelo iqala ngokubulawa kukaNatalia Etxano, intatheli ephumeleleyo evela eGernika. Ulwaphulo-mthetho lwadluliselwa ngokusasaza ngokusebenzisa uthungelwano oludumileyo lwentlalo kwaye yafikelela amawaka eembono, ethi yothuse wonke umntu. Umbhali wenze ibali elipheleleyo; Inkcazo yakhe yemeko-bume icocekile, njengoko kunjalo nangeenkcukacha ezichanekileyo zophando lwamapolisa. Ngokwenxalenye yabo, abalinganiswa bahlukile kwaye baphumelele kakuhle, benedrama ezilukhuni.
1 Isishwankathelo soMdaniso weeTulips
2 Uhlalutyo lomdaniso wee-tulips
2.5 Imfihlakalo rhoqo
4 Olunye ulwazi malunga nombhali: Ibon Martín Álvarez
4.1 Ukuhamba ngeLizwe laseBasque
4.2 Iinoveli zakwangoko
Isishwankathelo se Umdaniso wee-tulips
Kwakuyimini eqhelekileyo uloliwe kaloliwe waseUrdaibai wenza uhambo lwayo njengesiqhelo, nini, Ngequbuliso, umqhubi wabona into ekude ngqo kwiitraki. Njengoko wayesondela, wakwazi ukubona ngokucacileyo ukuba yayingantoni: yayiyiyo umfazi oboshwe esihlalweni, ene tulip ebomvu ezandleni zakhe. Indoda kwangoko yazama ukumisa umatshini wokutshixiza, kodwa yayisazi nzulu ukuba akunakwenzeka ukuyenza ngexesha.
Ngaphambi nje kokuba kuqalwe, umqhubi wakwazi ukumqonda lo mama ... yayimalunga nenkosikazi yakhe, uNatalia Etxano, intatheli eyaziwayo yerediyo evela eGernika. Ingqondo egulayo eyacwangcisa ulwaphulo-mthetho olubi yashiya iselfowuni kwindawo yesehlo, nalapho le ntlekele yasasazwa ngqo kuFacebook. Amawaka ababukeli akwazile ukusibona eso siganeko singenabuntu.
Ngenxa yezi ziganeko, iCandelo eliKhethekileyo lokuBulala abantu liyile, ukuqalisa uphando ngeli tyala. Eli qela lenziwe ngumhloli ophantsi UAne Cesteno kunye neqabane lakhe uAitor Goneaga, kunye neearhente UJulia Lizardi, uTxema Martínez kunye nesayikholojisti uSilvia.
Xa kuqalwa uphando, iinkcukacha ezizodwa zolwaphulo-mthetho ziyavezwa, kwaye phakathi kwabo, Eyona nto icace gca kwaye iyabetha: i-tulip ebomvu nokuqaqamba ezandleni zexhoba, into ekunzima ukuyifumana ekwindla. Oku kunye nezinye izinto zibonisa ukuba akangomnye nje umbulali kwaye mhlawumbi umbulali obulalayo.
Le mpikiswano isebenza xa befumana eminye imizimba yabafazi benobungqina obufanayo.. Iqala njalo ke inzame ngokuchasene nexesha lombulali omnyama kunye nokuqonda.
Uhlalutyo Umdaniso wee-tulips
Umdaniso wee-tulips (2019) yinto evuyisayo isethwe ikakhulu kumasipala waseGernika woluntu lwaseBasque. Incwadi inezahluko ezingama-79 ezimfutshane, Ezinye zazo zikho ixelwe kumntu wesithathu ngumbali owazi yonke into, kwaye abanye kuqala ngomnye wabalinganiswa ebalini.
Abalinganiswa abaphambili -amalungu amane ecandelo lophando— zicaciswe kakuhle kakhulu, zinamabali awomeleleyo, ahambayo kwaye anomdla, angabalekiyo kwinyani yangoku. Aba ngabantu abaneempawu ezahlukeneyo kunye neenkcubeko, abo ziya kuguquka ngokuthe ngcembe njengoko iqhinga liqhubeka.
Phakathi kwabalinganiswa Uqaqambisa uAne Cesteno, oxelelwa ubomi bakhe bonke. Kunye naye, uJulia kunye nezinye iiarhente zilungisa icebo. Ibali likaIbon likhokelela umfundi ukuba abe yinxalenye yobomi babo, aye kwinqanaba lokuba abathande ngokungathi ubathiyile.
Ukongeza kwesihloko esiphambili sophando, ezinye izihloko zinikezelwe. Enye yezona zinto zibalulekileyo zezi ubundlobongela obuphathelele kwezesini enxibelelene ngqo ne ukungcakaza. Ziyabonakala ukuxhatshazwa kwamapolisa norhwaphilizoUkuhlukunyezwa, ukuxhatshazwa kunye nokuxhwaleka kosapho.
Amava afunyenwe ngumbhali ngohambo lwakhe abonakaliswa ngokwaneleyo kwimbali. UMartín uchaza ngokweenkcukacha indawo nganye eUrdaibai; Isiphumo silula kwaye sihle ngexesha elinye, kakhulu kangangokuba ngokufunda akukho nzima ukuthelekelela iindawo zeGernika okanye iMundaka; iingxangxasi kunye neminye imihlaba.
Imeko engummangaliso -Yenziwe ngumgwebo ombi ochazwe ekuqaleni kwencwadi-- igcinwa kumgca ngamnye kulo lonke ibali. Isisombululo sicacisiwe ukuba sihlisiwe ngokugcina, okugcina umfundi enomdla ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni.
Umdaniso wee-tulips unenqanaba lokwamkelwa eliphezulu kwiwebhungaphezulu kwe-85% yabafundi bayithandile incwadi. KwiAmazon kuphela, umsebenzi unamanqanaba angaphezu kwe-1.100, ngamanqaku aphakathi ayi-4,4 / 5. Iinkwenkwezi ezi-5 ziphambili, ngama-57%; ngelixa amanqaku angaphantsi kweenkwenkwezi ezi-3 ezimbalwa, kuphela yi-10%.
Abathandi bokuthandabuza bayakuvuyela esi sitolimende. Ngumsebenzi okhawulezayo, omtsha, onwabisayo, onesingqi esinamandla kunye nesiphelo esimangalisayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, yeyona ndlela ilungileyo yabathandi bemincili.
Olunye ulwazi malunga nombhali: Ibon Martín Álvarez
Intatheli kunye nombhali weGipuzkoan u-Ibon Martín Álvarez wazalwa e1976 kwisixeko saseSan Sebastián (ilizwe laseBasque), kufutshane nomda waseFrance. Wafunda uNxibelelwano kunye neNtatheli kwiYunivesithi yelizwe laseBasque. Emva kokugqiba isidanga sakhe, wasebenza iminyaka eliqela kwimithombo yeendaba eyahlukeneyo yendawo, umsebenzi awadibanisa nenye yezona zinto azithandayo: ukuhamba.
Ukuhamba ngeLizwe laseBasque
Ubomi bakhe bujikile xa wagqiba kwelokuba alandele elinye lamaphupha akhe, ukuhamba umhlaba kunye nejografi yelizwe laseBasque. Isicwangciso sakhe yayikukuhamba amakhulukhulu eendlela kwindawo enembali ye-Euskal Herria, zombini iindawo zabakhenkethi neendawo ezisemaphandleni. Ukufikelela kumnqweno wakhe kwamenza wangena kuncwadi, Waqala ukubhala iincwadi malunga nokuhamba kwakhe kunye neendlela zakhe kwiindawo zaseSpain.
Ngezi zikhokelo, Eyona njongo iphambili yombhali ibikukukhuthaza utyelelo kwiindawo ezinamandla amakhulu okhenketho, kodwa ezingaziwayo. Uyiphumeze ngendlela elula: wenze izindululo ezahlukeneyo ngokusekwe kuphando lwakhe kwindawo yaseBasque. Uninzi lwezi ncwadi lunokwenzeka Enkosi kwinkxaso ka-vlvaro Muñoz.
Kwi 2013, thaca inoveli yakhe yokuqala, awayibiza ngokuba sisihloko Intili engenagama; ibali elimalunga nedolophu yakowabo. Enkosi ngokwamkelwa kakuhle kwale ncwadi yokuqala, emva konyaka wapapasha isaga se-Nordic thrillers umnxeba Ulwaphulo-mthetho lwendlu yokukhanya (2014). Olu luhlu luqulathe imisebenzi emine: Indawo yokuKhanyisa yokuThula (2014) Umzi-mveliso weShadow (2015) Okokugqibela Akelarre (2016) kunye Cage yetyuwa (2017).
Emva kwempumelelo yesaga -Ibalisa ngeziganeko zombhali uLeire Altuna-, epapashiweyo Umdaniso wee-tulips (2019). Ngale noveli inezinto ezithandabuzekayo, umbhali waseBasque ukwazile ukuzibeka phakathi kwezona zinto zibalaseleyo zolu hlobo, ngenxa yokuzibandakanya ebangele inani elikhulu labafundi. Kwi 2021, yaqhubeka ne ba vuyayo, ne ntetho inoveli yakhe yamva nje: Ixesha lolwandle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Umdaniso wee-tulips
UPaula Gallego. Udliwanondlebe nombhali we-inki esidibanisa
Usuku lwalahleka uthando